वीपीपछि भिजन भएका नेता बाबुराम हुन् : रामेश्वर खनाल - Nepal News - Latest News from Nepal
१० वैशाख, काठमाडौं । आर्थिक विश्लेषकसमेत रहेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले वीपी कोइरालापछि डा. बाबुराम भट्टराईलाई आफूले भिजन भएको नेताका रुपमा पाएको बताएका छन् ।
हामी कहाँ नेतृत्वमा भिजन नहुनु ठूलो समस्या हो । यो समस्याबाट हामी अझै केही वर्ष गुज्रन्छौं । किनभने, भिजनरी मान्छे देखिएका छैनन् । कुनै दलको गर्भमा लुकेर बसेको होला । जसलाई हामीले अहिले भिजनरी होला कि भनेका छौं, गगन थापा, गोकर्ण विष्टहरु । बाहिर बस्दा पो भिजनरी देखिएको हो, पदमा बस्दा हुनुपर्‍यो नि । पदमा गएर ड्राइभ गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
राजनीतिक भिजनले समाजको व्यवहारमा परिर्वतन ल्यायो भने विकास पनि तीव्र गतिले अघि बढ्छ । विकास भएपछि समानता आउँछ । आजको मितिसम्म पनि ४० प्रतिशत घरहरुमा शौचालय छैन । सही तरिकाले हाम्रो दिशा पिसाबलाई व्यपस्थापन गर्नुपर्छ, यो भयो भने हाम्रो स्वाथ्य राम्रो हुन्छ, हामीलाई रोग लाग्दैन भन्ने सन्देशसमेत पुर्‍याउन सकेका छैनौं । यो हाम्रो समाजको संरचनात्कगत समस्या हो । त्यो वर्गको मान्छे र अत्याधुनिक सेवा सुविधा प्रयोग गर्न जान्ने मान्छेको आर्थिक हैसियत पनि फरक हुन्छ । किनभने यसको उत्पादकत्व बढी हुन्छ । अर्कोको कम हुन्छ किनकि उसले त एक महिना झापाडखाला लागेर काम गर्न सक्दैन ।
कति विश्वविद्यालय बने, कति अस्पताल बने जस्ता कुराहरु क्षेत्रगत विकासको कुरा हुन् । क्षेत्रगतको छाड्नुस्, सिंगल भिजन, ब्रोड भिजन हुन्छ नि म मेरो देशलाई यस्तो बनाउँछु । उल्लु नै भएपनि राजा वीरेन्द्रले एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउँछु भनेको जस्तो । कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिंगापुर जस्तो बनाउँछु भनेको जस्तो । त्यतिको भिजन पनि भइदिए हुन्थ्यो । त्यो केही छैन । कसैको पनि छैन । सानो कुरा गर्नुहुन्छ ।
नेपालमा अहिलेको समस्या भनेको दिर्घकालीन सोचको हो । राजनेताले यस्तो कुरा देख्छ, जुन कुरा आम मानिस र बुद्धिजिवीले पनि देख्न सक्दैन ।
यो पनि पढ्नुस् – राजनीतिले गति लिएन, तर समाज कहाँ पुग्यो ?
यसको उदाहरण के हो भने, हा जुन चाङ भन्ने कोरियन अर्थशास्त्री छन् । उनले ४/५ वटा पुस्तक लेखेका छन् । एउटामा के लेखेका छन् भने कोरियामा १९६५ मा पार्क चुङ ही सत्तामा आएपछि उनले ५ वर्षभित्र मैले मेरो देशको वर्षमा प्रतिव्यक्ति डलर हजार रुपैयाँ पुर्‍याउँछु भनेर भिजन बनाए । जुनबेला कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ८० डलर थियो । तर, उनले केही हेरेनन् । भिजन भनेको कतिपय बेलामा पागलजस्तो पनि लाग्छ । ८० बाट १००० पुर्‍याउन असम्भव भनेर आलोचना भयो । पढ्दै नपढेको, अर्थशास्त्र नबुझेको पनि भने । तर, १९७० मा १२०० डलर पुग्यो ।
त्यसपछि पार्कलाई के लाग्यो भने देशलाई विकास गर्ने हो भने स्टील फ्याक्ट्री चाहिन्छ । युरोपको विकासका पछाडि स्टिल र कोइला हो । पार्कले विश्व बैंकलाई लोनका लागि आग्रह गरे । तर, फलाम पनि छैन, बजार पनि छैन । आईआरआर निकाल्यो, त्यो त एकदमै कम । विश्व बैंकले भन्यो, सम्भव छैन ।
पार्क चुङ हीले नगरी हुँदैन भने । जापान उसको उपनिवेशमा बसेको भएकाले केही दिन्छ कि भनेर गए । त्यसबेला जापान स्टीलको पावर हाउस थियो । जापानले हुन्छ ,सहयोग गर्छु त भन्यो तर, टोली गएर हेर्दा विश्व बैंकले जस्तै सम्भव छैन भन्यो ।
प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक मलाई काठमाडौ सफा चाहिन्छ, एकजना मान्छेले पनि फोहोर पारेको म देख्न चाहन्न भनेर आर्मी, पुलिस, नागरिकलाई भन्ने हो भने सम्भव छ ।
त्यसपछि पार्क चुङ हीले हामीले जसरी पनि बनाउने र हाम्रै पैसाले बनाउने भनेर आर्मीको रिटायर कमाण्डरलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर पोस्को स्टिल कम्पनी स्थापना गरे । आर्मीको मान्छेलाई ल्याएर सीइओ बनाएको भनेर विश्व बैंकले उल्लीबिल्ली बनायो । तर, पाँच वर्षमा पोस्को सफल एवं नाफमुखी कम्पनीमा परिणत भयो । अहिले पोस्को संसारको सबैभन्दा ठूलो र नाफामा भएको स्टील फ्याक्ट्री हो । कोरियामा फलाम खानी थिएन, स्टिलको बजार पनि थिएन ।
यस्तो भिजन अरुबाट आउँदैन । प्रधानमन्त्रीले सक्छन् । एउटा सफल भएपछि अरुमा त लहर लाग्छ ।
प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक मलाई काठमाडौं सफा चाहिन्छ, एकजना मान्छेले पनि फोहोर पारेको म देख्न चाहन्न भनेर आर्मी, पुलिस, नागरिकलाई भन्ने हो भने सम्भव छ । तर, त्यो भिजन मुख्य सचिव वा अरु कसैले दिएर हुँदैन । उसलाई कतिजनाले टेर्ने ? प्रधानमन्त्रीले भन्ने हो भने त कार्यकर्ता दौडिन्छन् ।
मैले एकपटक डा. बाबुराम भट्टराईलाई भनेको थिएँ कि तपाईहरुले द्वन्द्वकालमा हाम्रो जहाँ आधार इलाका छ, त्यहाँका कुनै पनि बालबालिका घरमा बस्न पाइँदैन भनेको भए जम्मै एसएलसी गर्ने अवस्थामा पुग्थे, सबै पढ्थे । शिक्षकले विहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म पढाउनुपर्छ भनेको भए त्यहाँका बालबालिका बोर्डफस्ट हुन सक्थे । त्यो एउटा उर्दीले हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले भिजन दिने हो भने उर्दी पालना गर्ने मान्छे हुन्छ । सिंगापुरमा गरेको ड्राइभ त्यही हो ।
त्यस्तो भिजन टेक्नोक्र्याट, विदेशीबाट आउँदैछ । राजनीतिक नेतृत्वले दिने हो । टप लेभलले नदिएसम्म हुँदै हुँदैन ।